Taariikhda My Butros » 7 Talooyin xiriir Romantic
Last updated: Oct. 23 2020 | 2 min akhri
Markaasaa malaa'igtii jacaylka ayaa soo qarqaraacay albaabka aad? Waxaad ka mid tahay kuwa ugu nasiibka badan, laakiin hadda aad u dhawrtid ololkii. Sidee kuwa lamaane weligeed ah u qaban? Waad saxan tahay in ay eegaan in ay jihada iyo isku dayaan in ay bartaan iyaga wax ka. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah qarsoodigooda iyo talooyin qaar ka mid ah inuu kaa caawiyo inaad sii wado la xiriir jaceyl guul:
1. Naftaada ku kalsoonow
Ma ahan dhan adiga kugu saabsan, laakiin wax badan oo ka mid ah arrimaha xiriirka ka heli ilo ay labada wada-hawlgalayaasha’ is-aaminaadda. Illeen, ka hor inta jecel qof, aad qabto in heshiis buuxa naftaada, kalgacayl iyo naftaada ku kalsoon tahay. In lagu jiro laba qof oo aan waa fursad lagu daba dhuunto qof ee dib u. Ma isagu / iyadu u dhalaalaya? Ha isku weydiin sababta uu isagu / iyadu waa inaad la. Halkii, hubi inaad ka samaysaa ciyaar wanaagsan. Isaga / iyada ayaa sidoo kale fursad u heysta inuu qof aad sida noqon. Isagoo aan aheyn kalsoonaa, Waa in aad isu aragto inaad ah qofka aad tahay, iyo waxa uu ninkaaga arkaa inaad ee.
2. Nasato aad masayrka
Ahaanshaha laba qof oo ka dhigan tahay wada socodka oo isku jiho ah. Kasta oo kale ee la imaan waa lagama maarmaan ah oo toos ah oo la xiriira is-aaminaadda. Your lamaanahaaga qorshaynayso in ay leeyihiin fiidkii ah saaxiibada ee baar? Sii isaga / iyada boos qaar ka mid ah oo aan weerar la su'aalaha sida ku samayn: Halka aad ahaayeen? Ma jireen Dad gabdhaha / guys? Masayrka waa mid daal iyo waxa dhab ahaan waa habka ugu wanaagsan ee ay u soo diraan qof iska.
3. Kasta oo kale oo taageero
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan inaad tahay in labada qof waa in aad leedahay qof ku taageeraan in times of baahan. Ogolaanshaha dhiirigelinta, iyo Wiile, dabeecad la mid ah marka aad lamaanahaaga u baahan yahay. Qof kasta oo ku jira xiriir guul ayaa kuu sheegi doona wada-hawlgalayaasha ka taataabtay in ay yihiin, horreeya oo dhan, daacad iyo saaxiibada si kasta oo kale oo taageeraya, oo annana dabadeed kaliya, kuwii ku caashaqi jiray.
4. Kasta oo kale oo la yaab leh
Waxaan kulligeen dareemeynaa cawaaqibka joogtada ah, miridhku waxan aad iyo aad sweetie noqotay baradho Gogol. Waxaan dhamaanteen leenahay caadooyin dhallaankayagu in ay buuxiyaan nolosheena, laakiin haddii aad rabto inaad sii ololka aad xiriirka ee up, isku day inaadan si aad u nuugo caadiga ah maalin kasta iyada oo aan qalloocinaya kasta oo noloshayda. Ka bax wada, wadaagto waayo-aragnimada cusub. Xusuusnow in jacaylka waa sida ilmo, waxaa loo baahan yahay in la siiyo.
Isgaarsiinta Open waa habka ugu surefire in xiriir xoog badan. Waxay kaa caawinaysaa inaad hesho si kasta oo kale oo fiican, fahamto sida aad dareensan tahay arrimo kala duwan, iyo arko kale ee aragti. Ha dhiso qalcado cammuudda! Kala midba midka kale iyo aasaaska aad xiriirka la sii adkaynayo doonaa in la taaban karo.
6. Markii qaar ka mid ah waxaad soo qaadataa
Xidhiidh aan u baahan yahay waqti u go'an, laakiin taasi macnaheedu ma aha in lammaane kasta haysan karaan wax lagu tirin kuwii ku. Weli waxaad leedahay saaxiibadaa, hiwaayadaha iyo shaqada! Ducaystaaye markii qaar ka mid ah iyaga iyo naftaada in aad keligaa. Dhowr saacadood marka laga reebo lamaanahaaga dhigi doonaa inaad seegi iyo mid kasta oo dheeraad ah oo kale soo dhoweyneynaa.
7. Daacad in midba midka kale
Daacad waxa ay sal calayhi waayo nooc kasta oo xidhiidh. Daacad kasta oo kale oo la xiriiraan dareenkaaga hadal ama hadal la'aanba. Taasi waxay ka dhigi doonaa oo kaliya in aad xiriir xoog.
3 Talooyin in aad samayso Chick kaamilka Magnet!